Puntland oo Diiwaangelineysa Ciidamadeeda Qalabka Sida.
Guddiga tirokoobka iyo diiwaan galinta ciidamada Puntland ayaa maanta bilaabay diiwaan galinta ciidanka bilayska Puntland. Diiwaankaan ayaa ka bilaabatay xarunta taliska ciidanka bilayska ee gobolka Nugaal, halkaas oo maanta ay iskasoo xaadiriyeen dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidanka bilayska heer gobol. Guddiga tiro-koobka ciidamada ayaa horey usoo dhameeyay diiwaan galinta ciidanka...
Taliyihii Xabsiga Dhexe ee Xamar oo Shaqadii Laga Joojiyey/Maxey Tahey Sababtu?.
Taliska ciiddanka asluubta Soomaaliya ayaa shaqadii ka joojiyay taliyihii Xabsiga Dhexe ee Xamar, Sarreeye Guuto Maxamed Shiikh Xirsiile, kadib markii lagu eedeeyay inuu maxbuus xanuunsan Kala baxay isbitaalka kadibna uu ku geeriyooday xabsiga. Shir jaraa'id oo uu talisku qabtay ayuu ku sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadaas foosha xumayd...
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay dhagax la sheegay inuu yahay "kheyraad qaali ah" oo si "sharci darro ah" looga soo qaaday deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan. Warar kala duwan ayaa kasoo baxay cidda soo qaadatay dhagaxan oo yaallay meel ay gacanta ku hayaan xoogagga Al-Shabaab. Maamulka Hirshabeelle...
M/weyne Farmajo Iyo Kenyatta Oo Isku Afgartay In Amniga Labada Dal Uu Yahay Mid Isku xiran,
Madaxweynaha dowladda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isla gartay ahmiyadda ay leedahay in si wadajir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgalyada xuduudaha iyo guud ahaan xasilloonida gobolka. Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Kenyatta ayaa adkeeyay in amniga...
Doorasho Caynkee Ah Ayaa Ka Dhaceysa Soomaaliya 2020-2021?(WAR-BIXIN)
Sida uu qabo Dastuurka Federaalka Soomaaliya waa in dalka afartii sanaba hal mar doorasho ka dhacdo. Doorashadii sadeddexaad ee dalka gudihiisa ka dhacaysa wakhtigeedi waa soo dhowaadey, Waxaana mugdi weyn ku jirta qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta. Haddaba waxaan isku dayaynaa in aan akhristayaasha la wadaagno aragtiyada...
Raggii Loo Haystey Kiiskii Caasho Ilyaas oo Puntland Shaacisey Xilliga La Qasaasayo.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xassan Aw-Cismaan ayaa shaaciyay waqtiga la fulin doono xukunka dilka ah ee maxkamaddaha Puntland ku xukumeen saddexdii nin ee kufsaday islamarkaana dilay Caasho Ilyaas Aadan. Xeer-ilaaliyaha guud ayaa sheegay in xukunka la fulin doono 11-ka bisha labaad ee sannadkaan marka ay saacaddu tahay 8:00 subaxnimo,...
Xeerka Doorashooyinka Soomaaliya oo Aqalka Sare Maanta La Horgeeyey.
Xildhibaannada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la horgeyay sharciga doorashooyinka Qaranka kaasi oo ay marsiiyeen aqrinta koowaad. Golaha Dhawaan guddi ka tirsan Golaha Aqalka sare u saaray shircigan doorashooyinka Qaranka oo ay dhawaan meelmariyeen xildhibaannada Golaha Shacabka. Guddiggan uu magacaabay guddoomiyaha Aqalka sare ayeey shaqadoodu tahay oo kaliya...
Deegaanka Tooratoorow oo Ciidamada Dawladdu La Wareegeen.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay gacan ku heynta deegaanka Tooratooroow oo ah saldhiggii ugu weynaa Ururka Al-shabaab. Deegaanka Tooratooroow saldhiggii ugu weynaa ee Ururka Al-shabaab iyo xaruntii ugu weyneyn ee Maxkamadaha dadka lagu kala saaro ee laga aadi jiray dhulka ay dowladdu maamusho.. Ciidamada la wareegay deegaankan Tooratooroow ayaa la...
Xafiiska Q/M iyo GMDQ Soomaaliya oo Kawada Hadley Doorashooyinka 202o-021.
Diyaar garowga Soomaaliya ee doorashada qorsheysan ee qof iyo cod ah 2020/2021, ayaa looga hadlay kulan xog-wadaag ah oo ay maanta si wadajir ah u shir-guddoominayeen Gudiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Xafiiska hawlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee soomaaliya. Waxaa kulanka ay kasoo qeyb-galeen xubno ka socday saaxiibada Soomaaliya iyo deeq-bixiyeyaasha...
1234...1,410Page 3 of 1,410